Shiniile Sport:Nicklas Bendtner oo Su,aalo laga waydiiyay kusoo laabashadiisa Arsenal | shiniilenews.com
Monday, July 20th, 2015 | Posted by Shiniile
Shiniile Sport:Nicklas Bendtner oo Su,aalo laga waydiiyay kusoo laabashadiisa Arsenal
Su`aal la xariirtay in Nicklas Bendtner uu dib ugu soo laabto Arsenal ayaa dhalisay in ciyaartooyda kooxdaas oo safar ku jooga Singapore in ay la dhacaan qosol jees jees ah .
Wariye ayaa weydiiyay Alex Oxlade-Chamberlain su`aal aheyd n laacibka halyeeyaga ah ee uu rajeynayo in Arsenal uu dib ugu soo laabto waxa uuna deg deg ugu jawaabay ” Nicklas Bendtner” ka dib qosol gows dambeedka ah ayay qac ka siiyeen ciyaartooyda Arsenal ee meesha fadhiyay .
Nicklas Bendtner ayaa Arsenal u ciyaray inta u dhaxeysay 2005-tii iyo 2013-kii balse sedex jeer ayaa amaaah lagu diray waxa uuna Arsenal u ciyaaray 108 kulan kaliya 24 gool ayuu dhaliyay waxa uuna haatan u ciyaaraa kooxda VfL Wolfsburg ee Jarmalka .
Liverpool Oo Xiisaynaysa Mario Gotze Iyo Pep Guardiola Oo Beeniyay In Gotze Uu Ku Biirayo Kooxda Juventus
Mario Gotze ayaa markii hore si wayn loola xidhiidhinayay kooxda Juventus laakiin waxa kale oo soo baxay warar kale oo muujinaya in tababaraha kooxda Liverpool ee Rodgers uu xiisaynayo xidigan koobka aduunka Germany kula guulaystay ee Gotze.
Wakiika Mario Gotze ayaa hore shaaca uga qaaday in Guardiola uu burburinayo tayadii uu xidigani lahaa taas oo mugdi galisay mustaqbalka Gotze ee Bayern Munich. Xidgan laftiisa ayaa qirtay inuu doonayo sidii uu uga ciyaari lahaa meel ka baxsan horyaalka Germany ee Bundesligaha.
Iyada oo Bayern Munich ay ku sii dhawaanayso inay kooxda Juventus kala soo wareegto Arturo Vidal ayay Juventus iyaduna doonaysaa inay Mario Gotze kooxdeeda ku soo darto. Guardiola oo shir jaraa’id kaga hadlayay Shanghai ayaa beeniyay in Gotze uu ku dhaw yahay inuu kooxda Juventus ku biiro.
Guardiola ayaa yidhi: “Mario wuxuu halkan ku haystaa qandaraas, waa ciyaartoygaygii sidoo kale waa ciyaartoy fiican. Aniga maskax ahaantayda wuxuu xili ciyaareedka oo dhan ahaan doonaa ciyaartoy Bayern Munic ah, laakiin waxaan ogahay in aanu tababaraha oo kali ahi go’aanka gaadhayn, waxa ay ku xidhan tahay kooxda”.
Sarkaalka Bayern Munich u qaabilsan saxaafada ee Markus Horwick ayaa shaaca ka qaaday inay heleen dalbyo lagu doonayo Mario Gotze.Inkasta oo aan la sheegin inay wax dalab ah diyaarisay ayay haddana Liverpool diirada ku haysaa saxiixa Gotze oo doonaya inuu ka ciyaaro meel ka baxsan horyaalka Germany.